अब भूत लेखन, परामर्श, कागजपत्रहरूको अनुवादका लागि लेखक बन्नुहोस्
लेखकका लागि असाइनमेन्टहरू: भूत लेखन, सल्लाह, अनुवाद र अधिक।
१२० भन्दा बढी लेखकहरू हामीसँग काम गर्छन्। हामी १ students बर्ष भन्दा बढि विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्दै आएका छौं।
हरेक दिन नयाँ अर्डरहरू
लचिलो काम घण्टा
हरेक दिन नयाँ अर्डरहरू।
तपाईंको आफ्नै मूल्य निर्धारण गर्नुहोस्।
Than०० भन्दा बढी विषयहरु।
बजारको अनुभव १ of बर्ष भन्दा बढी।
म धेरै वर्षको लागि पेपरनरहरूका लागि लेख्दै छु र अहिलेसम्म राम्रो अनुभव मात्र भएको छ। द्रुत भुक्तान यो खुशी हो।
म विशेष गरी मेरो प्रश्नहरूको उत्तरको लागि क्रेता हुबनरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
प्रस्तावित शीर्षकहरू विविध छन् र वास्तवमै सधैं मेरो लागि केही। फिट
म कसरी लेखक बन्न सक्छु?
लेखक फारम भर्नुहोस् र त्यसपछि मान्यता प्रक्रियाको साथ अगाडि बढ्नुहोस्।
निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्
असाइनमेन्टहरूको लागि मूल्य प्रस्ताव गर्नुहोस्, खोजी गरिएको सूची लेखक बन्नुहोस्, र तपाईंको रेटिंग बढाउनुहोस्।
समय र उच्च गुणवत्ताको अर्डर डेलिभर गर्नु सफल सहयोगको लागि आवश्यक छ।
वैज्ञानिक कागजातहरूको लेखक बन्नको लागि, तपाईं एक साधारण पंजीकरण प्रक्रिया पारित गर्न र एक प्रश्नावली भर्नु पर्छ। रेजिष्ट्रेसनको बखत हाम्रो लेखक-भर्तीकर्ताले सबै आवश्यक प्रश्नहरूको स्पष्टीकरण दिनेछ। हामीसँग काम गर्न, हामीलाई निम्न कागजातहरू चाहिन्छ:
1. तपाईं द्वारा बनाइएको नमूना कार्य
२. तपाईको उच्चतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाण
3. तपाईंको हालको सम्पर्क विवरणहरू
प्रशोधन समय अधिकतम दुई कार्य दिनहरू हो। तपाईंले सबै औपचारिकता पूरा गरेपछि, तपाईंलाई अज्ञात अर्डर पोखरीमा पहुँच दिइनेछ।
लेखकका लागि लाभहरू:
१. तपाई सधै घरबाट अफिसमा जानु भन्दा काम गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँ जहिले पनि तपाइँको घर वा अन्य कहीं अर्डरहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ।
२ तपाईंसँग छ सम्भाव्यता तपाईको विशेषज्ञता र क्षमताको क्षेत्रमा निर्भर गर्दै काम छनौट गर्न। तपाईं कुन काम स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेर निर्णय गर्नुहोस्।
You. तपाईसँगdछउसले कामको लागि तपाईको मुल्य निर्धारित गर्ने सम्भावना छ। यदि तपाईं प्रबन्धकले तोक्नुभएको मूल्यसँग सहमत हुनुहुन्न भने, तपाईंको विकल्प प्रस्ताव गर्नुहोस् र प्रबन्धकसँग मूल्य समन्वय गर्नुहोस्।
Ord. अर्डरहरू लगातार उपलब्ध छन्. हामीसँग तपाईलाई सँधै कामको मौसम प्रदान नगरी दिइन्छ।
5. सुविधाजनक भुक्तानी प्रणाली। पाठहरु र काम को लेखक नियमित रूपमा एक महिना मा दुई पटक भुक्तानी प्राप्त गर्दछ।
You. तपाईसँगdछउसले तपाईंको विशेष अनुसन्धान क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर पायो। हाम्रो सूचीमा than०० भन्दा बढी वैज्ञानिक शाखाहरु समावेश छन्। तपाइँ सबै प्रकारका कामहरू फेला पार्नुहुनेछ: grade कक्षा कक्षाको काम जस्तै निबन्ध लेख्न क्वान्टम मेकानिकलमा समस्या समाधान गर्न।
You. तपाईं एक प्राप्तउचित शुल्क मानहरू मध्ये एक जसको लागि पेपरनरड्स कम्पनी खडा हुन्छ।
पेपरनरड्समा स्वतन्त्र लेखकको रूपमा काम गर्नु तपाईंको कमाईको मुख्य स्रोत हुन सक्छ वा तपाईंको खाली समयमा एक प्रभावी अंशकालिक समय हुन सक्छ। यो पनि एक राम्रो अवसर हो यदि तपाइँ आफ्नो क्षेत्र मा काम गरिरहनु भएको छैन भने तपाइँको व्यावसायिक योग्यता गुमाउनु हुँदैन। अब एक विद्यार्थी लेखक बन्नुहोस्।
भाषा पहिचान गर्नुहोस्अफ्रिकीअल्बानियनअम्हारिकअरबीअर्मेनियालीअजरबैजानियाबास्कबंगालीबर्मीबोस्नियाईबल्गेरियनसेबुआनोचिचेवाचिनियाँ ट्रेडचिनियाँ भेरिडेनिशDeutschअंग्रेजीएस्पेरान्तोएस्टोनियनफिलिपिनोफिनिशFranzösischफ्रिसियनगैलिसियनजर्जियनग्रीकगुजरातीहाईटियनहोउसाहवाइयनहिब्रूहिन्दीह्मोङईग्बोइन्डोनेसियालीआयरिशआइसल्यान्डिकItalienischerजापानीजाभानीजयेडिसकन्नडकजाखकातालानखमेरकिर्गिजकोरियालीकोर्सिकानक्रोएसियालीकुर्दिशलाओल्याटिनलात्भियनलिथुनियनलक्जमबर्गिशमालागासीमलयालममलेशियनमाल्टिजमाओरीमराठीम्यासेडोनियनमंगोलियाईनेपलेसिसडचनर्वेजियनपश्तोफारसीपोलिसपोर्तुगालीपंजाबीरोमानियनरुसीसामोनस्कटिश गेलिकस्विडेनीसर्बियालीसेसोथोशोनासिन्धीसिंहलास्लोभाकस्लोभेनियालीसोमालीस्पेनीस्वाहिलीसुन्डानीजताजिकतामिलतेलुगुथाईचेकटर्कीयूक्रेनीहंगेरीउर्दूउज्बेकभियतनामीवेल्शबेलारूसीहोसायोरूबाजुलु
अफ्रिकीअल्बानियनअम्हारिकअरबीअर्मेनियालीअजरबैजानियाबास्कबंगालीबर्मीबोस्नियाईबल्गेरियनसेबुआनोचिचेवाचिनियाँ ट्रेडचिनियाँ भेरिडेनिशDeutschअंग्रेजीएस्पेरान्तोएस्टोनियनफिलिपिनोफिनिशFranzösischफ्रिसियनगैलिसियनजर्जियनग्रीकगुजरातीहाईटियनहोउसाहवाइयनहिब्रूहिन्दीह्मोङईग्बोइन्डोनेसियालीआयरिशआइसल्यान्डिकItalienischerजापानीजाभानीजयेडिसकन्नडकजाखकातालानखमेरकिर्गिजकोरियालीकोर्सिकानक्रोएसियालीकुर्दिशलाओल्याटिनलात्भियनलिथुनियनलक्जमबर्गिशमालागासीमलयालममलेशियनमाल्टिजमाओरीमराठीम्यासेडोनियनमंगोलियाईनेपलेसिसडचनर्वेजियनपश्तोफारसीपोलिसपोर्तुगालीपंजाबीरोमानियनरुसीसामोनस्कटिश गेलिकस्विडेनीसर्बियालीसेसोथोशोनासिन्धीसिंहलास्लोभाकस्लोभेनियालीसोमालीस्पेनीस्वाहिलीसुन्डानीजताजिकतामिलतेलुगुथाईचेकटर्कीयूक्रेनीहंगेरीउर्दूउज्बेकभियतनामीवेल्शबेलारूसीहोसायोरूबाजुलु
ध्वनी प्रकार्य २०० वर्णहरूमा सीमित छ
विकल्पहरू : इतिहास : प्रतिक्रिया : दान नजिक
निम्न लेखकहरू चाहन्थे
शुल्क २2500०० € - 3500 XNUMX०० €
शुल्क १ 1500०० € - २2500०० €
भाषा पहिचान गर्नुहोस्अफ्रिकीअल्बानियनअरबीअर्मेनियालीअजरबैजानियाबास्कबंगालीबोस्नियाईबल्गेरियनबर्मीसेबुआनोचिचेवाचिनियाँ (ver)चिनियाँ (ट्रेड)डेनिशDeutschअंग्रेजीएस्पेरान्तोएस्टोनियनफिनिशFranzösischगैलिसियनजर्जियनग्रीकगुजरातीहाईटियनहोउसाहिब्रूहिन्दीह्मोङईग्बोइन्डोनेसियालीआयरिशआइसल्यान्डिकItalienischerजापानीजाभानीजयेडिसकन्नडकजाखकातालानखमेरकोरियालीक्रोएसियालीलाओल्याटिनलात्भियनलिथुनियनमालाबारमालागासीमलेशियनमाल्टिजमाओरीमराठिकम्यासेडोनियनमंगोलियाईनेपलेसिसडचनर्वेजियनफारसीपोलिसपोर्तुगालीपंजाबीरोमानियनरुसीस्विडेनीसर्बियालीसेसोथोसिंहलास्लोभाकस्लोभेनियालीसोमालीस्पेनीस्वाहिलीसुन्डानीजताजिकतागालोगतामिलतेलुगुथाईचेकटर्कीयूक्रेनीहंगेरीउर्दूउज्बेकभियतनामीवेल्शबेलारूसीयोरूबाजुलु
अफ्रिकीअल्बानियनअरबीअर्मेनियालीअजरबैजानियाबास्कबंगालीबोस्नियाईबल्गेरियनबर्मीसेबुआनोचिचेवाचिनियाँ (ver)चिनियाँ (ट्रेड)डेनिशDeutschअंग्रेजीएस्पेरान्तोएस्टोनियनफिनिशFranzösischगैलिसियनजर्जियनग्रीकगुजरातीहाईटियनहोउसाहिब्रूहिन्दीह्मोङईग्बोइन्डोनेसियालीआयरिशआइसल्यान्डिकItalienischerजापानीजाभानीजयेडिसकन्नडकजाखकातालानखमेरकोरियालीक्रोएसियालीलाओल्याटिनलात्भियनलिथुनियनमालाबारमालागासीमलेशियनमाल्टिजमाओरीमराठिकम्यासेडोनियनमंगोलियाईनेपलेसिसडचनर्वेजियनफारसीपोलिसपोर्तुगालीपंजाबीरोमानियनरुसीस्विडेनीसर्बियालीसेसोथोसिंहलास्लोभाकस्लोभेनियालीसोमालीस्पेनीस्वाहिलीसुन्डानीजताजिकतागालोगतामिलतेलुगुथाईचेकटर्कीयूक्रेनीहंगेरीउर्दूउज्बेकभियतनामीवेल्शबेलारूसीयोरूबाजुलु
"पठाउनुहोस्" क्लिक गरेर म मेरो व्यक्तिगत डेटाको प्रसंस्करणको लागि अनुमोदन दिन्छु गोपनीयता नीति.